LG OLED TV na-agba Challenge Cha Cha Online
LG OLED TV na-ewe Cha Cha Cha Cha Cha Cha Cha Online
Dị ka ndị a ma ama na-ekere òkè n'egwuregwu ịgba egwu
Cheedị echiche ihe ga - ekwe omume mgbe TV kacha ọhụụ na - ezute ngwa egwuregwu egwuregwu kachasị ọsọ ma dị ike. Oge nzaghachi ọsọ ọsọ, eserese dị mma na imikpu miri emi na Dolby Vision IQ na Dolby Atmos na-akwado TV.
Nke ahụ bụ mmeghachi omume nke kelere ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa otu mgbe LG Electronics haziri asọmpi egwuregwu mbụ nke Online Celebrity na Nigeria.
Kemgbe mmalite azụmaahịa ya na 1950s dị ka ihe nzuzu nke teknụzụ na ngosi sayensị, ịgba chaa chaa ghọrọ otu n'ime ụdị ntụrụndụ kachasị emetụta ụwa.
Ihe bidoro dị ka ọrụ egwuregwu dị n'èzí ma ọ bụ n'èzí site na nnukwu igbe dị na arcade usoro ghọrọ obere igbe nke ezinụlọ ọ bụla ga-enwe ma nwee ọ inụ na nkasi obi nke ụlọ ha.
Oge ọla edo dị egwu nke egwuregwu n’agbata afọ 1990 na 2000, wetara ndị na-ege ntị ọhụụ nwere mmasi na ọhụụ teknụzụ na-eto eto. Nke a mekwara nnukwu ahịa maka ndị egwuregwu niile na ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ndị na-emepụta telivishọn.
N'ime afọ iri gara aga, LG Electronics ewepụtala ụfọdụ TV nke na - emeri ndị egwuregwu na - egwu egwuregwu n'ụwa niile hụrụ n'anya. OLdị OLED ya nke sitere n'ike mmụọ nsọ ma gbasaa usoro 8K na-enye ọmarịcha foto na ogo dị mma maka ahụmịhe nlele nke abụọ.
Iji nye ndị ahịa ya ndị ahịa ahụ ọhụụ ọhụụ nke ọhụụ ọhụụ nke ọhụụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere OLED TV Online Celebrity Gaming Showdown na-egosi kpakpando abụọ ama ama - VJ Adams (Mc / Host / Dj / Gamer) na Praiz (Musician / Gamer) ) na-agbakọ ibe ha na FIFA 21 na Mortal Kombat Games.
Ihe omume a sitere na ọnọdụ ndị egwuregwu ahụ gafee nyiwe anọ; Twitch, YouTube, Facebook na Instagram na ndị ama ama na-akwado nkwado site na ndị Fans ha.
Tupu ihe omume ahụ, e wepụtara ọdịnaya na LG SNS yana Praiz na VJ Adams iji mee ka a mata ihe omume ahụ.
E nyere ndị na-ege ntị nke jikọrọ ihe omume ahụ ohere ịkọ ndị mmeri nke egwuregwu ọ bụla iji kwado ohere iji merie LG LED TV. Ndị nnọchi anya LG nọ n'ala iji zaa ajụjụ ndị na-ege ntị.
Ihe omume emere na nso nso a bụ otu n'ime ọtụtụ ihe omumu nke LG na Nigeria. Ndị a ma ama nọ n'oge Grand Final nke LG OLED Gaming Challenge n'afọ gara aga ma bụrụ ezigbo ndị na-eso LG ụdị.
Gaminggba Cha Cha Online na-enweta mmata na-abụkarị ihe zuru ụwa ọnụ na ọtụtụ ụdị na-eme ike ha niile ịbanye na omume ahụ.
N'ikwu okwu banyere ntinye LG maka ntinye nke TV nke ga-eme ka ahụmịhe egwuregwu nke ndị ahịa ya ka mma, Maazị Mike Ahn, Onye isi njikwa, Home Entertainment TV Division, LG Electronics West Africa, kwuru na LG OLED TV Gaming asọmpi na-anabata isi ihe na-atọ ụtọ nke ndị ahịa ya. na-ewere ha gafee fim ahụ, ihe omume egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu na-ahụtụbeghị ihe anya na n'azụ ihe ngosi kachasị dị na OLED TVs.
Ọ gara n'ihu kwuo na ụlọ ọrụ ahụ ga-erute ijeri $ 3 site na 2025 na LG dị ka akara ngosi na-atụ anya na-adị njikere ịkwalite nke a ma debe OLED TV dị ka egwuregwu TV kachasị mma nye ndị na-ege ya ntị na Nigeria site na LG OLED TV Online Celebrity Gaming.
LG LG bidoro asọmpi egwuregwu na-adịghị n'ịntanetị na 2018 na-eleta ọtụtụ obodo na Nigeria na-egosipụta OLED TV dị ka ndị egwuregwu gamers, yana nnukwu ngwụcha emere na Lagos na 2019.
Asọmpi asọmpi 20/21 eruola ugbu a yana egwuregwu a na-egwu na Lagos, Owerri, Port Harcourt na mgbe adịghị anya a ga-egwu ya na Warri ebe a ga-eme ngwụcha ngwụcha oge n'ọnwa Ọgọst.
Anyị na-anwa ịme ihe na-adịghị n'ịntanetị na ntanetị maka ndị na-asọpụrụ anyị na ndị ahịa anyị ka anyị wee hụ ụdị OLED TVs na ihe ọ ga-enye n'ihe gbasara imepụta ihe na ntinye ntinye dị oke ala na oge nzaghachi 1ms dị egwu. Anyị soro AMD rụkọrịta ọrụ iji weta FreeSync Premium na LG OLED TVs.
Obere ugha na obere latency na-ekwe ka egwuregwu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na njedebe ha zuru oke site na egwuregwu egwuregwu doro anya ma dị mma. 6
“LG bụ onye izizi webatara teknụzụ OLED na-agbanwe agbanwe na nnukwu TV, ma taa, a na-ere nde LG LGED. Ndị ọkachamara n’ụwa niile na-eto LG OLED dị ka teknụzụ TV kachasị mma, ekele ya pụrụ iche pixel na-enye ọkụ.
A na-asọpụrụ LG OLED na 72nd Annual Technology & Engineering Emmy® Awards maka ndị ahịa OLED TV. Nkwupụta ahụ gosipụtara LG na-aga n'ihu na-eme ihe ọhụrụ iji bulie ma mepụta telivishọn iji zute nkọwapụta nkọwapụta nkọwapụta.
LG OLED TVs bụ ndị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ụwa na ndị okike ama ama nwere ekele dị ukwuu maka mmepụta nke agba ha na-enweghị atụ, na ọdịiche na-enweghị atụ.
LG Electronics weghaara ụlọ CES onyinye kachasị na ihe omume dijitalụ niile nke 2021 - oge dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme maka ụlọ ọrụ teknụzụ - na-enweta nsọpụrụ karịa 190 gafee ngwa ụlọ ya na ụdị ntụrụndụ ya.
Ngosiputa ugha nke CES nke Engadget (ihe nlere nke ndi CES) na igwe onyonyo nye LG OLED maka uzo nke asaa; na 2021 ka LG C1 nke toro eto OLED TV si na puku kwuru puku TV ọhụrụ egosipụtara na CES 2021.
Naanị OLED na-egosipụta pikselụ nwere ọgụgụ isi nke nde 8.3 nke enwere ike ịchịkwa n'otu n'otu, na-ebute ọkwa ojii kachasị omimi, nkọwa zuru oke na mpaghara gbara ọchịchịrị, yana agba bara ụba maka ogo ihe osise kachasị dị mma.
Maka egwuregwu egwuregwu na egwuregwu dị egwu na ọdịnaya ihe nkiri, nzaghachi na ịdị mma nke ahụmịhe LG OLED enweghị atụ. N'ihe banyere ikiri egwuregwu egwuregwu immersive, ogo dị oke mkpa dị ka ogo oyiyi.
LG TV's AI Sound Pro na-enye ọnọdụ raara onwe ya nye maka egwuregwu na-ahapụ gị ịnụ ụda egwuregwu niile. Ma ọ bụ onye nchịkwa na-eti iwu, ndị egwuregwu na-eduzi ndị otu ha, ma ọ bụ bọọlụ na-efepụ buut, bat ma ọ bụ raketị - ị gaghị atụ uche otu ụda.
Nkwado Dolby Atmos pụtara na ị nwere ike ịnwe ọdịyo 3D dị ike na nke kachasị mma, ebe Bluetooth gbara gburugburu dị njikere na-enye njikọ dị mfe na ndị ọkà okwu XBOOM dị ike LG na nhọrọ dị iche iche nke ụda.
Na-egosiputa ntinye nke LG na imewe ihe puru iche, uzo ato ohuru nke GX Gallery (55-, 65- na 77-inch) na-enye ihe omimi di iche iche, nke ekwekorita nke OLED mere nke na achoghi uzo ozo.
Nke a na - enyere telivishọn aka ijikọ ọfụma onyonyo onyonyo n'ụdị - ụdị nke 65-inch bụ naanị 20mm dị gịrịgị na-enweghị mkpa igbe njikwa dị iche. Igwe onyonyo ahụ gbakwunyere na mgbidi maka ihe osise na gallery.
Na-ewepụta onyonyo nke nkọwa na nghọta doro anya na-atụbeghị anya, ụdị LG OLED ZX Real 8K a na-atụ anya ya (ụdị 88 OLED ZX na 77 OLED ZX) na-ewepụta ugboro anọ nha ihuenyo nke 4K na 16 ugboro nke Full HD.
Iji mee ka e nwee ezigbo ahụmịhe 8K, TV ndị LG na-ezute ma gafere nkọwapụta ụlọ ọrụ maka 8K Ultra HD TVs dị ka ndị ahịa ahịa ahịa kọwaa, na-eme ha n'etiti ndị mbụ 8K ụdị ruru eru iji akara CTA 8K Ultra HD.
Childrenbọchị Childrenmụaka 2021: Otu 9ijakids si mee ka mmụta maka ụmụaka dị mfe na Nigeria
LG weputara 31 Red Dot Design Awards
Wzọ 5 iji nata mmelite techbuild.africa